Iindlela ezi-5 ze-Snapchat ezinokusetyenziselwa ukuKhuthaza ishishini lakho | Martech Zone
Iindlela ezi-5 ze-Snapchat ezinokusetyenziselwa ukuKhuthaza ishishini lakho
NgoLwesibini, Septemba 20, 2016 NgeCawa, nge-15 kaJanuwari 2017 Douglas Karr
Njengoko amaqonga ezentlalontle anyuka ngokuthandwa, kuhlala kukho ithuba lokusebenzisa iqonga ukunxibelelana kunye nokuzibandakanya nabathengi abanokubakho. I-Snapchat ngokucacileyo igqithile kolo lindelo, ngaphezulu kwe-100 yezigidi zabasebenzisi bemihla ngemihla abajonga ngaphezulu kweebhiliyoni zevidiyo ezi-8 yonke imihla.
I-Snapchat ibonelela ngeemveliso kunye nabavelisi bomxholo ithuba yenza, ukhuthaze, uvuze, usasaze, kwaye usebenzise unxibelelwano olukhethekileyo kwiqonga.
Ngaba abathengisi bayisebenzisa njani i-Snapchat?
I-M2 ibambe i-Australia Ukwabelane nge-infographic enkulu, indlela i-Snapchat enokuYandisa ngayo iBrand yakho, kwaye zibonelele ngeendlela ezintlanu ezinokuthi inkampani yakho isebenzise ngayo i-Snapchat.
Nika ukufikelela kwiminyhadala ebukhoma -Vuyisa abaphulaphuli bakho ngombono oqinisekileyo wokwaziswa kwemveliso, imiboniso yorhwebo, okanye iminyhadala yohlobo oluthile.
Hambisa umxholo wabucala -Bonelela umxholo okhethekileyo okanye owahlukileyo kubaphulaphuli bakho abanokungafumani kwamanye amaqonga.
Nikezela ukhuphiswano, inzuzo okanye unyuselo -Bonelela ngeekhowudi zokunyusa okanye izaphulelo kubalandeli. Ukupha kunye nokwenyusa ziindlela onokuthi ugcine ngazo abalandeli bakho bebuya.
Thatha abantu ngasemva -Bandakanya abaphulaphuli bakho ngokubonelela umxholo weqonga kunye nokubonisa ukuba i-brand yakho yahlula njani.
Iqabane kunye neempembelelo zeSnapchat - abanezakhono Iimpembelelo zeSnapchat inokukunceda usasaze ulwazi kubemi behlabathi ekunzima ukufikelela kubo ngemithombo yeendaba zemveli.
tags: ngeneUkuthengisa nge-snapchat
I-Adobe Spark: Imizobo yeNtlalontle, amabali eWebhu kunye neeVidiyo zoopopayi
Sep 21, 2016 kwi-5: 16 AM
Inqaku elinolwazi kakhulu. Ndiyavuma nawe ukuba ngokunyuka kwamaqonga eendaba ezentlalo athandwayo, kuhlala kukho ithuba lokusebenzisa iqonga ukunxibelelana kunye nokuzibandakanya nabathengi abanokubakho. I-Snapchat yinethiwekhi yemidiya yoluntu edumileyo ekuvumela ukuba wabelane ngeevidiyo kunye nemifanekiso nabahlobo bakho kunye nosapho. Bonke abasebenzisi beefowuni abanobuqili bajonga ubuncinci ividiyo yonke imihla. Ndiye ndawathanda amanqaku amahlanu ekuxoxwe ngawo kweli nqaku ngendlela ii-brand ezisebenzisa ngayo i-snapchat. Amashishini asebenzisa i-snapchat yokunyusa imveliso kunye nokuhambisa umxholo wabucala. Funda eli khonkco: https://www.animatedvideo.com/blog/numbers-branding-snapchat/
Eli khonkco labelana ngamathuba okuphawula nge-snapchat.